Kungani odokotela basebenzisa i-mercury kanti iziguli zisebenzisa ama-elektroniki aqapha umfutho wegazi?
Ukuqapha Ukucindezelwa Kwegazi
Uhlobo Lwengalo Lokucindezelwa Kwegazi
Isikhala seso Indlebe Thermometer
Isikhala seso Ebusweni Thermometer
Abangane abaningi babuza udokotela, kungani udokotela wesibhedlela ethanda ukusebenzisa i-electronic sphygmomanometer, kepha akhokhise isiguli ukuthi siye ekhaya ne-electronic sphygmomanometer?
Eqinisweni, lokhu ukungaqondi kwethu, awukho umthetho onjalo, i-sphygmomanometer yamanje ne-mercury sphygmomanometer zisesigabeni esivamile, udokotela okufanele akusebenzise, ​​uma iziguli zizosebenzisa i-mercury sphygmomanometer, nazo zingasebenzisa i-mercury sphygmomanometer.
Ngo-2020, ukunakekelwa kwezempilo kwamahhala kuzotholakala, futhi i-mercury sphygmomanometer izohoxiswa kancane kancane ezibhedlela. Manje kuyisigaba sesikhashana nje. Ngakho-ke, ezibhedlela, singabona kwesinye isikhathi sisebenzisa i-mercury sphygmomanometer, kwesinye isikhathi sisebenzisa i-electronic sphygmomanometer。
Abangane abaningi ngokuba khona kwengcindezi yegazi ngogesi, lokhu akunakugwenywa, ngoba imonitha yegazi emakethe, kunezinkinga ezithile, ukukalwa kaningi akulona iqiniso, kuyadukisa, ukuletha ukudideka kuwo wonke umuntu, ngakho-ke, abantu abaningi abakholwa ekuqapha umfutho wegazi ngogesi.
Empeleni iziqaphi zomfutho wegazi ezisetshenziswa yimindeni yethu zinembile.Zonke izitifiketi ze-FDA, CE, ISO13485, Roahs njll.
Abaqaphi be-elekthronikhi yegazi banezinzuzo zabo:
1. Ayikho i-mercury, ehlisa umonakalo.
2, ukusebenza okulula, okulula ukukufunda, umuntu angasebenza futhi.
3. Umsebenzi wokuqopha ingcindezi yegazi nomsebenzi wokulinganisa isilinganiso senhliziyo.
4, inani linembe kakhudlwana, uma kuqhathaniswa ne-mercury sphygmomanometer kahle.
5. I-electronic sphygmomanometer ISEBENZISA indlela ye-oscillographic, ekala umfutho wegazi ngokulinganisa ukudlidlizela kokugeleza kwegazi odongeni lomthambo wegazi.
Ungayisebenzisa kanjani kahle i-elektroniki yegazi qapha?
1. Uma ungajahile ukukala, phumula imizuzu eyi-15. Lapho ulinganisa umfutho wegazi, hlala esihlalweni esinemhlane emuva endaweni ethulile, ekhululekile, umzimba wonke ukhululekile.
2. Susa umkhono wengalo engenhla, unamathisele isikhwama somoya engalweni engenhla, uphawu kumele lubhekiswe emthanjeni we-brachial; Unqenqema olungaphansi lwesikhwama kufanele lube yi-2 ~ 3cm ngaphezu kwendololwane.
3. Izingalo ezingenhla kufanele zibe sezingeni elifanayo nenhliziyo. Hlala ufudumele ukuvimbela ukuqhaqhazela ebusika.
4. Ngesikhathi senqubo yokulinganisa ingcindezi ezenzekelayo, isiguli asikwazi ukuba nesenzo, ngaphandle kwalokho isilinganiso sokucindezela sizohluleka ngenxa yegagasi lamanga elibangelwe ukunyakaza kwemisipha.
5. Isikhawu phakathi kwezilinganiso ezimbili kufanele sibe ngaphezu kwemizuzu emi-3, futhi isikhundla kanye nendawo kufanele kungaguquguquki ngangokunokwenzeka.
Ukuqapha umfutho wegazi kuncike ngokwabo, imitha yengcindezi yegazi ingumsizi ongcono!
Siyabonga inquriy, Sizokwenza uphendule wena emahoreni angu-24!
Inkampani: Hangzhou Sejoy Electronics &. Instruments Co., Ltd
Ikheli: No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, 311100, Hangzhou, China